သရဏံဂုဏ် – PoemsCorner
ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောပြမယ် အရင်ခေတ်က ဆင်နင်းသတ်တယ်ဆိုတာ အရက်စက်ဆုံး သတ်နည်းပဲတဲ့ဗျာ။ ဆင်ကို လူသတ်နည်း သင်ပေးထားတယ်တဲ့။ ရင်ဝကို တစ်ခါတည်း ခြေထောက်နဲ့ နင်းသတ်တာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ခြေထောက် လက်တစ်ဖက်စီကို နှာမောင်းနဲ့ လိမ်ချိုး ပြီးတော့မှ နင်းသတ်တာတဲ့ ဝေဒနာခံစားရအောင်လို့ အဲလို သတ်တာတဲ့ဗျာ။ အဲဒီ မိန်းကလေးကို အဲလို သတ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဆင်ဟာ မိန်းကလေးနားရောက်တာနဲ့ လှည့်ပြေးတော့တာပဲတဲ့။ နောက် လူသတ်ဆင်တွေ တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်သာ ပြောင်းသွားတယ် မိန်းကလေးနားကိုတောင် မရောက်ဘူးတဲ့။ မူးမတ်တွေကလည်း အချင်းချင်း တိုင်ပင်ကြတယ် ဒီကောင်မ မသေလို့မဖြစ်ဘူး သေမှ ဖြစ်မယ် မသေရင် ငါတို့ ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုပြီး ဘုရင်ကို လှည့်ပတ် လျှောက်တင်ကြတယ်။ ဒီကောင်မဟာ စုန်းမဖြစ်တာကြောင့် သတ်လို့မရတာပါဘုရား။ စုန်းဆိုတာ မီးကို ကြောက်ပါတယ်။ မီးနဲ့ သတ်ပါလို့ ပြောတယ်တဲ့။ ဘုရင်ကလည်း ဒါဆိုလည်း သတ်စေပေါ့ (ခေါင်းဆောင်တွေ ဦးနှောက်မရှိတာက အဲဒီကစတာ ထင်တယ်)။
Leave comment 14 Comments & 446 views
ကောင်းတယ် လိပ်ပြာရေ မနက်စောစောစီးစီး အနှစ်သာရ ရှိတာလေးတွေ ဖတ်ရလို့ကျေးဇူးပါဗျာ….။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် အပေါင်းတို့သရဏံဂုဏ် တည်မြဲကြပါစေဗျာ……….။ လိပ်ပြာရေ သာဓုဗျာ…..။
By: နှောင်းလူ at Dec 28, 2010
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နှောင်းလူရာ စောစောစီးစီးလေး လာအားပေးသွားလို့ .. . သူငယ်ချင်းကြီး ဒီထက် ချောမောပါစေဗျာ….
ကောင်းတယ် ကိုလိပ်ပြာ ဗုဒ္ဒဘာသာ ၀င် တစ်ယောက်အနေ နဲ့ အခုလို့ဘသာေ၇း ဆိုင်၇ာေ၇းတော့ ကုသိုလ်၇တာပေါ့ သာဓု ပါ
သာဓုပါဗျာ သာဓုပါ………. ခုလို လာရောက်အားပေးကြတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီဗျာ
ကို လိပ်ပြာ ညီမေးစ၇ာ၇ှိလို့ ညီ ကဗျာဘေးနားမှာ edit ပေါ်နေတယ် အကို ဘာလို့လဲ
ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ရဲလေးရ စာတွေ ပြန်ပြင်ချင်ရင် edit ရွေးပြီး ပြင်လို့ရတယ်လေ ညီ့ account logout လုပ်လိုက်ရင် မရှိတော့ဘူး………………..
ဟုတ် အကို ကျေးဇူး အကို အကို gtalk အကောက် သုံး၇င်လည်း ပြောပါအုံး
ဘာကို ပြောရမှာလဲ ရဲလေးရ gtalk အကောက်တော့ သုံးတာပေါ့ဟ……..
မဟုတ်ပါဘူး ကဗျာပဲ သုံးတာလားလို့ ပါ
လာအားပေးသွားပါတယ် ။ သာဓု ပါဗျာ။
By: dan at Dec 28, 2010
ကိုဒန် လာရောက်ဖတ်ရှု့အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။
By: nilar at Dec 30, 2010
ဒီလိုပုံစံ ဆောင်းပါးမျိုး များများေ၇းနိုင်ပါစေ လိပ်ပြာ ။ ဒီလိုေ၇းပုံမှာ လိပ်ပြာ လက်သံပြောင်တယ်။ ဦးနှောက်ထဲ တန်းခနဲ ၀င်အောင် ဥပမာ တွေ နဲ့ သိမှုဆိုင်၇ာတွေေ၇းနိုင်တဲ့ လိပ်ပြာ ဒီထက်ပိုပို လူ့အကျိုးဆောင်နိုင်ပါစေ။